जब पहिलो पटक आर्यनलाई भेट्न जेल पुगे शाहरुख खान, १८ मिनेट के गरे कुराकानी ? – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौ । बलिउड अभिनेता शाहरुख खान आफ्ना छोरा आर्यनलाई भेट्न पहिलो पटक पुगेका छन् । ड्रग घटनामा पक्राउ परेका आर्यनको रिहाइ बुधवार पनि भएन । बुधवार उनी बाहिर आउने अनुमान गरिएको थियो । तर बुधवार रिहा नभएपछि शाहरुख छोरालाई भेट्न पुगेका हुन् ।
शाहरुख यस अघि छोरा भेट्न गएका थिएनन् । पक्राउ परेर जेलमा रहेका छोरा आर्यन खानलाई बलिउड अभिनेता साहरुख खानले पहिलो पटक भेटेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । उनी विहिवार विहान आर्थर रोड जेल पुगेर छोरालाई भेटेर फर्किएको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् ।
यसअघि बुधबार मात्र त्यहाँको एक अदालतले जमानतमा रिहा हुनका लागि आर्यनले गरेको अपिललाई खारेज गरिदिएको थियो । मुम्बईको आर्थर रोड पुगेका साहरुखले त्यहाँ १८ मिनेट छोरासँग कुराकानी गरेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । ३ अक्टोबरमा क्रुजमा ड्रग पार्टी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका आर्यनसँग त्यसपछि साहरुख खानको यो पहिलो भेट हो ।
Previous नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चर्कियो, आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प
Next करिश्मा र ओलीबीच के कुरा भयो ? कोमल ओलीले गरिन् खुलासा